Football Khabar » च्याम्पियन्स कप : पहिलो खेलमै युभेन्टस टोटनह्यामसँग पराजित !
च्याम्पियन्स कप : पहिलो खेलमै युभेन्टस टोटनह्यामसँग पराजित !
प्रि–सिजनअन्तर्गत भएको पहिलो खेलमा इटालियन क्लब युभेन्टस पराजित भएको छ । इन्टरनेसनल च्याम्पियन्स कपअन्तर्गत आज सिंगापुरमा भएको खेलमा युभेन्टसलाई इंग्लिस क्लब टोटनह्यामले ३–२ ले स्तब्ध बनायो ।
निकै रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा टोटनह्यामलाई जिताउन ह्यारी केनले इन्जुरी समयमा मैदानको मध्यभागबाट गरेको दर्शनीय गोल निर्णायक बन्यो ।
यता, युभेन्टसका प्रशिक्षक माउरिसयो सार्री, मिडफिल्डर आड्रेन राबिओट र डिफेन्डर माथिस डि लिग्टका लागि भने डेब्यु खेल सुखद् रहन सकेन । युभन्टसले पछि परेको स्थिति उल्टाएर अग्रता लिए पनि अन्तिम समयमा गोल खाएर नतिजा गुमायो ।
टोटनह्यामका लागि खेलको ३०औं मिनेटमा इरिक लामेलाले पहिलो गोल गरेका थिए । उनकै गोलको मदतमा टोटनह्याम पहिलो हाफमा १–० ले अघि रह्यो ।
दोस्रो हाफमा खेलमा रोमाञ्चक दृश्यहरू देखिए । खेलको ५६औं मिनेटमा युभेन्टसका लागि गोन्जालो हिगुइनले गोल गर्दै खेल १–१ बनाए । त्यसपछि खेलको ६०औं मिनेटमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दर्शनीय गोल गर्दै युभेन्टसलाई २–१ को अग्रता दिलाए ।
तर, त्यसपछि टोटनह्याम पुनः खेलमा फर्कियो । उसका लागि खेलको ६५औं मिनेटमा लुकास मोउराले गोल गर्दै खेल २–२ बनाए । बराबरीतर्फ अघि बढेको खेलमा ९० मिनेटपछि थपिएको ४ मिनेटको तेस्रो मिनेटमा केनले मैदानको मध्यभागबाट हानेको आकासे प्रहारले गएर सोझै जाली चुम्यो ।
युभेन्टसका नयाँ मिडफिल्डर राबिओटको गल्तीका कारण सो गोल लागेको थियो । यता, युभेन्टसका गोलरक्षक पनि केही अगाडि बढेकाले उनले हाई आएको बललाई रोक्न सकेनन् । र, खेल टोटनह्यामले ३–२ ले जित्यो ।
प्रकाशित मिति ५ श्रावण २०७६, आईतवार १३:४६